I-Gemini Horoscope: Imihla ye-Gemini Zodiac Sign Ukuhambelana, Iimpawu - Gemini
I-Gemini Zodiac Sign Gemini Horoscope
Ulwazi malunga neGemini ngeenkwenkwezi x
Kor: Luhlaza, Mthubi
Iplanethi elawulayo: IMercury
Eyona nto ihambelanayo: Libra, Aquarius
Eyona ilungileyo kuMtshato kunye neNtsebenziswano: Sagittarius
Hlela Amanani: 3, 8, 12, 23
Ixesha elingqinelanayo: Nge-20 kaMeyi-20 kaJuni
Amanqaku anamandla: Unobubele, unothando, unomdla, uguquguquka, ungumfundi okhawulezayo kunye nokutshintshiselana ngezimvo
Ubuthathaka: Uvalo, ukuguquguquka, ukungaqiniseki
UGemini uyathanda: Umculo, iincwadi, iimagazini, iincoko, uhambo olufutshane lokujikeleza idolophu
UGemini akathandi: Ukuba wedwa, ukuvalelwa, ukuphindaphinda kunye nesiqhelo
Ukucacisa kunye nokukhawuleza, iGemini imele amacala amabini ahlukeneyo obuntu obufanayo kwaye awusoze uqiniseke ukuba uthetha nabani. I-Gemini inokuba nentlalontle, inxibelelana kwaye ilungele ukuzonwabisa, nangona kunjalo, ngakolunye uhlangothi, inokuba yinto enzulu kakhulu, icinge, ingazinzi kwaye ingabi nazigqibo.
Ukuba ngumqondiso womoya, iGemini ixhalabele yonke imiba yengqondo. Lo mqondiso ulawulwa yiMercury, eyiplanethi emele unxibelelwano, ukubhala nokufundisa abanye. Banomdla kuyo yonke into esehlabathini kwaye bahlala bevakalelwa kukuba akukho xesha laneleyo lokuva yonke into abafuna ukuyibona. Oku kubenza babe ngamagcisa abalaseleyo, ababhali kunye neentatheli. Isibonakaliso se-zodiac ye-Gemini sithetha ukuba ngamanye amaxesha abantu abazalwe phantsi kwesi sibonakaliso banemvakalelo yokuba esinye isiqingatha sabo silahlekile, ngoko bahlala bekhangele abahlobo abatsha, abacebisi kunye noogxa.
I-Gemini iyaguquguquka, inomdla, iyonwabisa kwaye ifuna ukuva yonke into esehlabathini, ke inkampani yabo ayikhe ikruquke okanye ikruquke.
Uthando kunye nesondo kwiGemini
Ukuzonwabisa kwaye uhlale ulungele umngeni wengqondo, uGemini ungumthandi ovuthayo. Unxibelelwano lubaluleke kakhulu kwiGemini njengokunxibelelana ngokomzimba, kwaye xa ezi zinto zimbini zidibanisa, akukho nto iba ngumqobo. Unomdla kwaye uhlala ekulungele ukudlala ngothando, uGemini uya kuchitha ixesha elininzi kunye nabathandi abahlukeneyo ade afumane okulungileyo, okumele kuhambelane nengqondo yakhe kunye namandla.
I-Gemini idinga ukuziva imincili, ukuhlukahluka kunye nothando ukuze yaneliseke ngokupheleleyo. Xa uGemini efumana iqabane lakhe elifanelekileyo, uya kuthembeka kwaye athembeke kude kube sekupheleni.
Ubuhlobo kunye noSapho kwiGemini
Abo bazalwa phantsi komqondiso weGemini bangabantu bentlalontle kwaye banandipha ukuchitha ixesha kunye nabahlobo kunye nosapho. UGemini unabahlobo abaninzi yaye uyathanda ukuthetha nokuqondwa, ngoko olunye lweempawu azijongayo kwabanye lunxibelelwano oluhle. Ngaphandle kokuhamba okucacileyo kwencoko, iGemini iya kulahlekelwa ngumdla ngokukhawuleza kunxibelelwano. Usapho lubalulekile kubo, ngakumbi abo malungu entsapho afana nabo. Ubuhlobo kunye nabantakwenu buxhaphake kakhulu kwiGemini, kwaye ixesha kunye nabo lixabisekile. Iimbopheleleko zentsapho zidla ngokuba lucelomngeni kuGemini, kodwa basoloko beyazi indlela yokuzisingatha.
Umsebenzi kunye nemali kwiGemini
Owona msebenzi ufanelekileyo weGemini ngulowo uvuselela ingqondo. IiGemini zingabantu abanobuchule, abanobuchule kwaye bahlala bekrelekrele kakhulu, ngoko ke umsebenzi wabo kufuneka ube namandla kwaye ube ngumngeni. Nangona kunjalo, abayithandi imisebenzi ephindaphindwayo.
Amakhondo omsebenzi alufaneleyo olu phawu ngootitshala, abagxeki, umqambi, intatheli, umbhali, umfundisi kunye negqwetha. Nawuphi na umsebenzi obonelela ngamathuba onxibelelwano kwaye uwagcine exakekile ngokwaneleyo ubalaseleyo. IiGemini zinokuba ngabarhwebi abakhulu. Ukudala imibono emitsha kunye nokusombulula iingxaki ziindawo apho iGemini inokugqwesa khona.
Isigqibo phakathi kokusebenza kunye nokuzonwabisa kunokuba nzima kwiGemini. Kwanokuba bakholelwa ukuba imali bububi obuyimfuneko, abaninzi abayi kuchitha ixesha elininzi becinga ngendlela yokuyifumana.
Indlela yokutsala indoda yeGemini
Indoda yeGemini inomdla kwaye igcwele ubomi, ngoko akusayi kuze kubekho ixesha elibi kunye naye. Ungumntu onomdla kwaye unendalo entle, ke uya kuba liqabane lakho elifanelekileyo ukuba ungumntu odlamkileyo nonamandla.
amadoda Gemini ngokwendalo incoko kunye nobabalo, ngoko ke ukuthandana esidlangalaleni lukhetho olubi ngokukodwa ukuba ufuna ukubarhwebesha, njengoko ngokuqhelekileyo iziko ingqalelo.
Enye yezona mpawu zimbi zeGemini kukutyekela ekujongeni phezulu kunye nokungazithembi ekukwazini ukwenza izigqibo. Ubuntu beGemini buphawulwa ngobumbini. Amadoda angamaGemini awahambelani kodwa akrelekrele, nto leyo eyenza ukuba abe nomtsalane ngakumbi kwabasetyhini.
Ngomntu ozelwe phantsi komqondiso weenkwenkwezi weGemini akunakwenzeka ukuba uhlale ezinyaweni zakhe. Ukuba ufuna ukumrhwebesha, ufanele wazi ukuba ufuna ukuvuselela ingqondo nokwahluka. Yiba mnandi, uvuselele, uhlekise amahlaya akho kwaye ungoyiki ukuzama into entsha ebhedini. Ukwahlukahlukana ngundoqo xa kufikwa ukuhenda indoda Gemini. Nangona kunjalo, gcina zonke iimvakalelo ngaphandle kwayo nayiphi na incoko kwaye uyigcine ilula kakhulu.
Ukwabelana ngesondo kunye nendoda yeGemini kunokuba ngamava amnandi, kodwa ukuba awukho ngamava ahlukeneyo, unokudikwa.
Ukuba ufuna ukutsala umfazi weGemini, kuya kufuneka ukwazi ukuqonda indalo yakhe emibini. Abasetyhini baseGemini banokuba nomdla kunye nobubele umzuzu omnye, kwaye bangabikho kwaye bakude ngokulandelayo. Oku kusisiphumo sotyekelo lwakho lwendalo lokulumka eluthandweni.
Umfazi ozelwe phantsi komqondiso we-zodiac weGemini unokuba nomdla kakhulu, uhlakaniphile, unengqondo kwaye uthambile. Enye yeempawu ezintle zeGemini yingqondo yabo evulekileyo.
Ngoxa i-Gemini ibhinqa idla ngokukhawuleza ukuba neentlobano zesini, ukuba kubudlelwane obunzulu, obuzibophelele kunye naye kuya kuthatha ixesha kunye nomonde. Nangona kunjalo, xa efumene indoda enokwanelisa iminqweno yakhe yesini kunye nengqondo, umfazi weGemini uya kuba ngowokuqala ukucebisa ukuphelisa i-bullshit kunye nokuqala ukuba yisibini sokwenene.
Umfazi ozelwe phantsi kophawu lweGemini unokuba liqabane elifanelekileyo kuwe ukuba uyakwazi ukujongana nesidingo sakhe esiqhubekayo sokufumana imingeni emitsha yengqondo neyesondo. Kwelinye icala, ngesondo kunye nomfazi Gemini ayisoze ikruqula.
Umfazi weGemini uhlakaniphile kakhulu, ngoko ukuba unokumfundisa into angayaziyo, uya kuchukumisa kwaye wandise amathuba okuphumelela intliziyo yakhe. Lilonke, ukuthandana umfazi Gemini kunokuba ngamava umdla kakhulu kwaye umngeni.
Iimpawu ezihambelanayo neGemini kufuneka ziqwalasele: Aries , Ingonyama , Iponti , Aquarium
I-Capricorn Khetha Uphawu Isagittarius Itaurus Ngena